Sunday July 10, 2016 - 19:45:10 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya magaalada Jubba ayaa sheegaya in boqolaal qof ay ku dhinteen dagaal saacado badan qaatay oo maanta ka dhacay meel ku dhow qasriga madaxtooyada iyo xarunta wasaaradda Gaashaandhigga.
Afhayeen u hadlay xoogaga Riyak Mashar madaxweyne ku xigeenka K/Suudaan ayaa sheegay in xoogagoodu ay iska difaaceen weerar xooggan oo ay kusoo qaadeen ciidanka xukuumadda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in 150 katirsan askarta iyo shaqaalaha xukuumadda lagu dilay dagaalkii maanta, khasaaraha ugu xooggan wuxuu ka dhashay duqeyn madaafiic loo adeegsaday oo ka dhacay qasriga madaxtooyada.
Wariye katirsan warbaahinta BBC-da ayaa soo sheegay in 100 Meyd uu ku arkay madaxtooyada, sarkaal u hadlay Q.Midoobe ayaa isna sheegay in dhimashadu ka badantahay 275 qof.
Dagaallada ugu culus waxay ka dhaceen xaafadda Buurta iyo xaafadda kale ee Ghodel, wararka ayaa intaasi ku daraya in 33 qof shacab ah ay ku dhinteen xero UN-ka ay ku leeyihiin galbeedka magaalada Jubba.
Marxalado Muhiim ah oo ay soo martay Koonfurta Suudaan.
*Bishii July sanaddii 2011 Koonfurta Suudaan waxay ka go’day Dalweynaha Suudaan kadib dagaal sokeeye oo 20 sanadood qaatay.
*Bishii December sanaddii 2013 dagaal sokeeye ayaa dib uga qarxay Koonfurta Suudaan waxaana falaagoobay madaxweyne ku xigeenkii wadanka,dagaalkaas waxaa ku dhintay 10-kun oo qof 2.2 Milyuun oo qofna waa ku barakacayeen.
*Bishii Augst 2015 xukuumadda iyo Fallaagada ayaa kala saxiixday Heshiis kadib markii Q.Midoobe ay dhinacyada cuna qabateyn kusoo rogtay.
* Bishii April sanaddii 2016 Hoggaamiyaha Fallaagada Riyak Mashar ayaa dib ugu laabtay Caasimada Jubba isagoo ah madaxweyne ku xigeenka wadanka.